Voasakana, Nalàna Sakana Ary Voasakana Indray ny YouTube Tany Pakistana · Global Voices teny Malagasy
Voasakana, Nalàna Sakana Ary Voasakana Indray ny YouTube Tany Pakistana	Voadika ny 10 Janoary 2013 1:20 GMT
Zarao: Taorian'ny telo volana nanakanan'ny governemanta ny YouTube, afaka niditra tao amin'ilay vohikala fizarana lahatsary ihany ireo Pakistaney ny 29 Desambra 2012. Nefa fohy ihany anefa ny faharetan'izany fitoniana izany.
@ayeshaesque Tahaka ny sangy ratsy ny fanakanana, fanalana sakana, sy fanakanana indray ny YouTube tanatin'ireo ora vitsivitsy. #Pakistan
Nitoraka bitsika ny Talen'ny Fifandraisan'ny change.org ao Inde, Raheel Khursheed :
@Raheelk: Oay mbola fohy noho ny fanambadian'i Kim Kardashian! #Pakistan'sYoutubeAffair
Koa inona izany no ao ambadik'io fanalana sakana hafahafa tampoka io? Nanoratra tao amin'ny Twitter ny mpiahy ny TedX ao Islamabad, Saad Hamid :
‏@SaadGH Angamba nosokafana nandritra ny 5 minitra ny Youtube satria te-hahita ny zava-bitan'i Katrina-akin tanatin'ilay jalsa farany teo [hazakaza-piarakodia] ilay zaza menavava Bilawal. Hmm!
Miresaka momba ilay lahateny mihantsy nataon'i Bilawal Bhutto Zardari, zanakalahin'ny Filoha ary filoha lefitry ny antoko mitantana ao Pakistana nandritra ny fankalazana ny tsingerintaona nahafatesan'ny reniny tamin'ny 27 Desambra i Saad. Talohan'ilay famerenana tampoka ny sakana, nandefa tamin'ny instagram ity sarin'ny vadiny mikaroka ny YouTube ity i Saad.
Nitaraina i Talat Aslam, tonian-dahatsoratry ny gazety Anglisy be mpamaky indrindra ao Pakistana, The News :
@titojourno Aza miteny amiko hoe nosokafan'izy ireo ny Youtube dia avy eo nosakanany indray! Nanana lisitra lava an'ireo zavatra tiako hojerena aho. Ary tsia an. Tsy tao anatin'ny lisitro IZANY horonantsary izany.
Miresaka momba ilay “Innocence of Muslims” i Talat, dia ilay horonantsary kely tetibola maharitra 13 minitra izay niteraka hatezerana manerana ny Tontolon'ny Silamo, ary niafara taminà hetsi-panoherana, fahafatesana ary fandraràna ny Youtube tao amin'ny firenena, izay nandà ny fanaisorana io horonantsary io ao amin'ny vohikalany.
Nitoraka bitsika i Mansoor Ali Khan, mpanao gazety mpitatitra mivantana ao amin'ny Geo News, (an'ilay kômpania tompon'ny The News ihany):
@MansoorGeoNews Arahabaina ry #Pakistan: Tsy afaka manapa-kevitra ny amin'ny fanokafana vohikala akory ny governemantantsika dia miandrandra azy ireo hiady amin'ny asa fampihorohoroana isika
Ny mampihomehy, araka ny voalazan'ny mpitoraka bilaogy Kala Kawa dia samy ao ambadiky ny famerenana tampoka ny fanakanana ny Youtube na ny The News na ny Geo News. Manazava izany izy ao amin'ny lahatsoratry ny bilaoginy, The Great YouTube Escapade (Ny Fitsoahana Goavan'ny Youtube):
Nitoraka bitsika i Ali Ansari, mpisera anaty aterineto sady mpisolo vava :
@alizansari: Raha tao amin'ny Twitter ny PM. Nakanana azy in-tapitrisa aho ary hitatitra azy ho spam.
‏@Karachi_Post: Adala, miaina anatinà vohitra eran-tany isika & saika tsy azo heverina ny fanivanana tanteraka ny aterineto.Nahoana izany no tsy azonao ry #Geo ?
@Razarumi: Mampiasa proxy aho hidirana amin'ny @youtube sy ireo vohikala hafa voasakana – ary dia mandeha tsara izany. HANKAHATRA an'ity [famerenana] sakana tsy misy dikany ity aho – arodano ny sivana!!